Hutano, 10 Kukadzi 2019
Svondo 10 Kukadzi 2019
Kukadzi 06, 2019
VaChamisa Vanoti Kwete kuMusangano Wadaidzirwa naVaMnangagwa
Bato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa rinoti harina kuenda kumusangano wakashevedzerwa naVaEmmerson Mnangagwa nekuti VaMnangagwa ndivo chikonzero chebopoto riri munyika.
Kukadzi 05, 2019
Kambani yaVaMagaya Inofaindiswa Mazana Manomwe eMadhora
Kambani yaProphet Walter Magaya yeProphetic Healing Deliverance Ministries, yeAretha Medical, nhasi yawanikwa iine mhosva yekutyora mutemo weMedicines Control Act mushure mekunge Va Magaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV/AIDS, Aguma, gore rapfuura vasina kutevedza gwara rinodiwa nemutemo.
Kukadzi 04, 2019
Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zvinoratidzira paChipatara Panonzi Ndipo panaVachiwenga muSouth Africa
VaChiwenga vanonzi vakabuda munyika zvechimbichimbi mukupera kwesvondo vachiendeswa kuSouth Africa kunorapwa, kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kuwana humbowo hwekuti vari pachipatara chikuru chemuSouth Africa ichi.
Mutevedzeri waMeya weChitungwiza, VaJabulani Mtunzi Vanopambwa Usiku Vachizonyuka Vave kuMapurisa
Mutevedzeri wameya veChitungwiza vakabvutwa pamba pavo neSvondo vusiku, VaJabulani Mtunzi, vawanikwa vakavharirwa pamapurisa epa Makoni kuChitungwiza kwekare.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kuti Vawongororwe Gomara Pachine Nguva
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese kuwongororwa chirwere chegomarara, apo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirwere ichi pazuva reWorld Cancer Day.
Kukadzi 01, 2019
VaMnangagwa Vanobatana neVeruzhinji Mukuchenesa Guta reHarare
Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena nhasi mushure mekunge mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevemabhizimisi, vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara.
Vana Makumi Matatu neVatanhatu Vari Muhusungwa
Sangano rinorwira kodzero dzevana, reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, rinoti harisikufara nemabatirwo arikuitwa vana vakasungwa panguva yekuratidzira masvondo maviri apfuura.
Ndira 28, 2019
VaMnangagwa Vanoti Mapurisa Akarova Vasungwa Pakuratidzira Vasungwe
Mutungamiri wenyika, VaEmerson Mnangagwa, vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira svondo rapera vanofanirwa kusungwa.
Ndira 26, 2019
Madzimai Anoti Akabatwa Chibharo neVarume Vaive nePfuti Vakapfeka Mbatya dzeMauto
Mamwe madzimai emimusha yeHopley neEpworth anoti ave kurara mudondo mushure mekubatwa chibharo nevanhu vaive vakapfeka mbatya dzemasoja
Ndira 24, 2019
Mtukudzi Anoitwa Gamba reNyika
Kudomwa segamba kwaMtukudzi kunotevera matanho akatorwa nesangano rinoona nezvemitambo neNational Arts Councils pamwe nemumiriri weNorton muNational Assembly, VaTemba Mliswa, rekukurudzira hurumende kuti Mtukudzi apihwe ruremekedzo rwegamba renyika kuitira kuti avigwe paNational Heroes Acre.
Ndira 22, 2019
Mapurisa Anosunga Varwere Vange Vari Muhupoteri
Vanhu makumi maviri nevasere vanga vatizira kune imwe imba iri kuHatfield kwavanga vachirapwa vari zvichitevera kurohwa mudzimba kwavanonzi vakaitwa nemasoja mumazuva apfuura, vanonzi vasungwa nemapurisa vari muhupoteri umu.
Ndira 21, 2019
America Inorangarira Doctor Martin Luther King Junior
America nemusi weMuvhuro yakarangarira Mufundisi airwira kodzero dzevanhu, Doctor Martin Luther King Junior avo vakaurawa muna 1968.